Ahoana ny fomba fanesorana ireo rindranasa amin'ny Dock ao amin'ny macOS Sierra | Avy amin'ny mac aho
Isaky ny mandefa kinova OS X vaovao i Apple, antsoina ankehitriny hoe macOS, dia tsara kokoa ny manao fametrahana madio amin'ny Mac, izany hoe mamolavola ny kapila mafy ary mametaka amin'ny alàlan'ny USB. Raha tiantsika hiasa tanteraka ny Mac antsika ary tsy misy olana, mihoatra ireo izay mety hoentin'ny rafitra fiasa dia tsy mety ny manavao ny Mac antsika amin'ny kinova farany satria ireo olana ananantsika ao aminy, hotaritarihinay hiditra amin'ity toerana ity izy ireo ary hanohy hijaly azy ireo izahay. Ny olana dia mipoitra rehefa nahavita nanamboatra ny Mac araka izay tiantsika sy amin'ireo rindranasa ampiasainay indrindra izahay.
Raha tsy nanao fanovana be dia be tamin'ny rafitra isika dia azo inoana fa tsy sarotra amintsika ny mahatadidy izay fanaingoana ampiasaintsika amin'ny Mac, ka io olana io dia ratsy kely kokoa. Ny olana dia mety hitranga rehefa mampiasa rindranasa marobe isika, fampiharana izay noho izy ireo fiaviana mampiahiahy (Heveriko fa takatra tsara izany) mila mikaroka, misintona ary mametraka indray isika, dingana iray izay maharitra fotoana lava be, fotoana izay tsy azontsika resena matetika. Fa raha manana fotoana ampy isika dia afaka mihevitra azy io ho ratsy kely kokoa. Mazava ho azy fa noraisiko ho zava-dehibe izany milamina ny rakitrao rehetra anaty backup.
Fafao ny app avy amin'ny Dock
Raha vantany vao vita ny fametrahana macOS, dia hodinihintsika ny dock, dock izay tonga miaraka amina fampiharana marobe, izay tsy hampiasainay ny maro.
Mba hialana amin'ireo rindranasa misy eo amin'ny seranan-tsambo dia mila mametraka ny tenantsika amin'ny totozy eo amboniny fotsiny isika ary manindry ny bokotra ankavanana.
Manomboka izao isika safidy ary tsindrio eo Esory amin'ny Dock ary hanjavona ny fampiharana avy eo amin'ny Dock izay mamela toerana bebe kokoa ho antsika hanampiana fampiharana bebe kokoa noho izay tena hampiasaintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba fanesorana ireo apps avy amin'ny Dock ao amin'ny macOS Sierra
Akaiky ny hanombohana ny karama Apple any Alemana
Ny lalao Mad Max dia azo alaina ho an'ny Mac amin'ny Mac App Store ankehitriny